In the Time of Crisis, Protect Your Valuable Assets; It's People | Myanmar Business Today
Home Business In the Time of Crisis, Protect Your Valuable Assets; It’s People
Mr. Christoph Vavrik, Managing Director of Myanmar Carlsberg
“Ifaproblem arises, protect your valuable assets first,” says Mr. Christoph Vavrik, Managing Director of Myanmar Carlsberg, during an interview with Myanmar Business Today. “The most important asset inacompany is not necessarilyabrand or exploration rights for an oil company or real estate. The biggest asset is always the people.”
Myanmar Carlsberg is one ofavery few companies who decided not to lay off anyone or cut the salary of its 859 employees at the time of economic turmoil amid the COVID-19 pandemic. The pandemic has put all business in dire straits as consumption drops, travel ceases, and trade comes to an abrupt stop.
The World Bank’s Myanmar Economic Monitor, published in late June, forecasted the country’s economic growth to be as low as 0.5 percent in the 2019-2020 Fiscal Year, revising its previous forecast of 6.4 percent earlier this year as all sectors are hit with adverse effects.
Likewise, the Ministry of Hotels and Tourism, inarecent survey, predicted that the country’s tourism sector would face headwinds in the coming months. And the survey showed over 50 percent of revenue drops in tourism-related industries.
Breweries and distilleries, whose products are not essential products for people, sufferedasevere decline in demands as bars and restaurants are closed to reduce the risk of the COVID-19.
Many companies are loss-making; thus, they cut costs in any means they can in an attempt to survive: some lay off some of their employees while others cut payroll or ceasing some of the business operations.
“We certainly did not lay off any person,” states Mr. Christoph proudly. “There two reasons for not doing that: the first one is humanity.”
Secondly, it’sagood business principle. Inarecently opened country like Myanmar, the talent pool is small. To fish out the right person with the right skillset from suchasmall talent pool is not easy. So, retainingagood employee is alsoagood move. It can strengthen employees’ loyalty and confidence in the company, who decides not to abandon them in the time of crisis.
“It makes more sense to keep them than just try small cost saving for one or two months,” declares 59-year-old former Member of Austria Parliament, who prefers-and chose-business life than political life after serving as an MP for four years from 2013 to 2017.
In fact, Carlsberg Myanmar sawa50 percent drop in April alone compared to the same period last year asaresult of preventive measures to curb the spread of the deadly virus and cancelation of the annual Thingyan Festival in April. It reduced production to an absolute minimum to keep the plant running sinceabrewery plant, in nature, needs to operate continuously; otherwise, it can take up to two months to restart. The plant now resumes normal productions as businesses reopen, and the government relaxed some preventive measures.
There are two microbreweries namely Burbrit Craft Beer and York street Brewing Co., and six commercial breweries: Alliance Brewery Co Myanmar (Asia Pacific Breweries-Heineken), Dagon, Emerald Brewery Myanmar (ThaiBev), Mandalay Brewery, Myanmar Brewery Limited, and Myanmar Carlsberg Co, Ltd.
Currently, Myanmar Beer, produced by Myanmar Brewery Limited, dominates the domestic beer market, while other beers like Myanmar Carlsberg share the remaining market, where alcohol consumption, according to WHO, was 2.9 liter per capita in 2010 and almost doubled to 4.8 percent in 2016. Of which, spirit consumption is 68 percent while beer shares 22 percent.
Denmark-based Carlsberg Group entered the local scene in 2013 when it inkedajoint venture deal with Myanmar Golden Star (MGS), owned by U Thein Tun, who also holds the majority of Myanmar Consolidated Media, which owns Myanmar Times.
“We started from zero four andahalf years ago,” says Mr. Christoph. “Now we are almost ten percent. That is notabad result.”
He is confident that Myanmar Carlsberg, thanks to its products and services, will hold one-fourth of the market share inafew years in the Myanmar market that has been growing at around 8 percent. However, there await challenges for local breweries: illicit trade. For instance, Emerald Brewery Myanmar, who brews Chang Beer in Myanmar, is also fighting its own Chang Beer, smuggled into Myanmar from Thailand. According toaresearch firm Euromonitor International, 30 percent of all beer consumed in Myanmar in 2016 was illicit trade resulting ina$50 million tax revenue loss for the country.
Illicit trade creates, in addition to tax revenue losses,alot of problems such as health safety issues, undermines local businesses, and challenges law and order.
“It feeds and nurtures an entire mafia of criminals. It starts with beer; then it goes on with drugs and maybe weapons, etc. So, (if illicit trade is not tackled down,) you create an entire parallel society of criminals,” says Mr. Christoph.
He links it to the United States’ Prohibition Era from 1920 to 1933. It isanationwide constitutional ban on the production, importation, transportation, and sale of alcoholic beverages. ‘Prohibition’ arguably boosted organized crimes as organized rum-running or bootlegging emerged in response to it, and mafia groups and other criminal organizations and gangs had mostly limited their activities to prostitution, gambling and theft until 1920.
Myanmar recently lifted the liquor importation ban, which has been in place for decades since 1962. However, industry experts and even authorities have doubts that it will have any immediate impact on illicit trade, which makes its way to major cities like Yangon and Mandalay through ethnic controlled border areas. Illegally imported alcoholic beverages can be found in every retail shop, restaurant, bar, and even in hotels in Yangon.
Carlsberg Myanmar plant in Bago
Despite these challenges and economic downturn during the pandemic, Myanmar Carlsberg seems to be confident about the potential in the Myanmar market as it plans to expand their brewery and determined to take more steps in going green as it intends to roof the plant with solar panels in an attempt to reduce energy consumption. In addition to that, it hasaplanned heat recovery system, in whichabrewery reuses heat produced in the fermentation process. Mr. Christoph’s remark reinforces the company’s confidence in Myanmar’s market potential.
“Long term, I am optimistic about this country. I am optimistic about the development of this country whether it is societal, political, or economic. That’s why we are here. I am optimistic about the market and business potential.”
“ပြဿနာတစ်ခုခု ကြုံတဲ့အခါ ကိုယ့်ရဲ့ တန်ဖိုးအရှိဆုံး ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကို ကာကွယ်ရမယ်” ဟု Myanmar Carlsbergမှ Managing Director ဖြစ်သူ Mr. Christoph Vavrik က Myanmar Business Today နှင့် အင်တာဗျူးတွင် ပြောသည်။
“ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှာ အရေးအကြီးဆုံး ပိုင်ဆိုင်မှုဆိုတာ ကုန်ပစ္စည်းအမှတ်တံဆိပ်တို့၊ ကုမ္ပဏီရဲ့ မူပိုင်ခွင့်တို့၊ မြေယာပိုင်ဆိုင်မှုတို့ကို ပြောတာမဟုတ်ဘူး။ အကြီးမားဆုံးသော ပိုင်ဆိုင်မှုဆိုတာဟာ လူတွေပဲ” ဟု ၎င်းက ရှင်းပြသည်။
COVID-19 ကပ်ရောဂါအတွင်း စီးပွားရေး ကြပ်တည်းနေသည့် ကာလ၌ စုစုပေါင်း အလုပ်ရပ်စဲခြင်း၊ လစာလျှော့ခြင်းမပြုလုပ်သည့် အနည်းငယ်သော ကုမ္ပဏီများတွင် Myanmar Carlsberg လည်း အပါအဝင်ဖြစ်သည်။ ကုမ္ပဏီအနေဖြင့် ၈၅၀ မျှရှိသော ၎င်းတို့၏ အလုပ်သမားများကို အလုပ်ထုတ်ခြင်း၊ လစာလျှော့ခြင်းမလုပ်ခဲ့ဟု ဆိုသည်။ ကပ်ရောဂါကြောင့် သုံးစွဲမှုများ လျော့ကျခြင်း၊ ခရီးသွားလာမှု ရပ်ဆိုင်းခြင်း၊ ကုန်သွယ်ရေးများ ပြတ်တောက်သွားခြင်းတို့ကြောင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအားလုံးမှာ အခက်ကြုံနေကြရသည်။
ဇွန်လ နှောင်းပိုင်းတွင် ကမ္ဘာ့ဘဏ်က ထုတ်ပြန်သည့် Myanmar Economic Monitor အစီရင်ခံစာတွင်တော့ ၂၀၁၉−၂၀၂၀ ခုနှစ်အတွက် မြန်မာနိုင်ငံ၏ စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုသည် သုညဒသမ ၅ရာခိုင်နှုန်းသာရှိမည်ဟု ခန့်မှန်းထားသည်။ ယခုနှစ်အစောပိုင်းက ခန့်မှန်းချက်တွင်တော့ ၆ဒသမ၄ ရာခိုင်နှုန်းရှိမည်ဟု ခန့်မှန်းခဲ့သည်။
ထို့အပြင် ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်သည့် စစ်တမ်းတွင်လည်း မြန်မာနိုင်ငံ၏ ခရီးသွားကဏ္ဍအနေဖြင့် လာမည့်လများတွင် အခက်အခဲများ ဆက်လက် ကြုံတွေ့နိုင်သည်ဟု ခန့်မှန်းထားပြီး လက်ရှိတွင်လည်း ခရီးသွားလုပ်ငန်းနှင့် ဆက်စပ်နေသော ကဏ္ဍများမှာ ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းကျော်မျှ ဝင်ငွေလျော့ကျနေကြောင်း တွေ့ရှိထားသည်။
COVID-19 ကူးစက်မှုမှ ကာကွယ်ရန်အတွက် ဘားများ၊ စားသောက်ဆိုင်များကို ပိတ်ထားခဲ့ရာ ဘီယာချက်လုပ်ငန်းများ၊ ယမကာထုတ်လုပ်ငန်းများမှာ ၎င်းတို့ထုတ်လုပ်သည့် ကုန်ပစ္စည်းများသည် လူတို့အတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော ကုန်ပစ္စည်းများမဟုတ်သောကြောင့် ဝယ်လိုအား များစွာ ကျဆင်းခဲ့မှုနှင့် ကြုံတွေ့ခဲ့ရသည်။
ကုမ္ပဏီများစွာမှာ အရှုံးပေါ်ခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် ဝန်ထမ်းများကို တာဝန်မှ ရပ်စဲခြင်း၊ လစာလျှော့ခြင်း၊ ကုန်ထုတ်လုပ်မှုရပ်ဆိုင်းခြင်းများ ပြုလုပ်လျက် ဆက်လက်ရပ်တည်နိုင်ရေး ကုန်ကျစရိတ်များ လျှော့ချခဲ့သည်။
“ကျွန်တော်တို့ကတော့ ဘယ်သူ့ကိုမှ အလုပ် မဖြုတ်ခဲ့ဘူး” ဟု Mr. Christoph က ဆိုသည်။ “အဓိကကတော့ အကြောင်းနှစ်ခုရှိတယ်။ ပထမတစ်ခုကတော့ လူသာချင်း ကိုယ်ချင်းစာမှုပဲ”
ဒုတိယတစ်ခုမှာ စီးပွားရေးလုပ်ကိုင်မှုကျင့်ဝတ်ကောင်းဖြစ်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံကဲ့သို့ မကြာသေးခင်ကမှ လမ်းဖွင့်ခဲ့သော နိုင်ငံအဖို့ ကျွမ်းကျင်လုပ်သားမှာ နည်းပါသည်။ ထိုကဲ့သို့ နည်းပါးသော ကျွမ်းကျင်လုပ်သားများအနက်မှ မိမိတို့အတွက် သင့်လျော်ပြီး လိုအပ်သည့် ကျွမ်းကျင်မှုရှိသည့် ဝန်ထမ်းကို ရရှိရန်ခက်ခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် ဝန်ထမ်းကောင်းကို ဆက်ထိမ်းထားခြင်းမှာ ကောင်းမွန်သော လုပ်ဆောင်ချက်ဖြစ်သည်။ အခက်အခဲကြုံနေစဥ် မိမိကို စွန့်ပစ်မသွားသည့် ကုမ္ပဏီအပေါ် ဝန်ထမ်း၏ သစ္စာရှိမှု၊ ယုံကြည်မှုကိုလည်း ရရှိစေမည်ဖြစ်သည်။
“တစ်လ၊ နှစ်လစာလောက် ကုန်ကျစရိတ်လျှော့ချဖို့နဲ့စာရင် ဝန်ထမ်းတွေကို ဆက်ပြီး ခန့်ထားတာ ပိုပြီး အဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်” ဟု အသက် ၅၉ နှစ်အရွယ် လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်ဟောင်းက ဆိုသည်။ Mr. Christoph မှာ ၂၀၁၃ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၇ ခုနှစ်အထိ သြစတြီးယား လွှတ်တော်တွင် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ဆောင်ရွက်ခဲ့ဖူးပြီး နိုင်ငံရေးသမားဘဝထက် စီးပွားရေးသမားဘဝကို သဘောကျ ရွေးချယ်ခဲ့သူဖြစ်သည်။
ကူးစက်ရောဂါကို ကာကွယ်ရန် ကာကွယ်ရေး အစီအမံများ ဆောင်ရွက် ကျင့်သုံးခြင်း၊ သင်္ကြန်ပွဲတော် ပိတ်ပင်လိုက်ခြင်းတို့ကြောင့် Carlsberg Myanmar အနေဖြင့် ဧပြီလတစ်လတည်းပင်လျှင် ဝင်ငွေ ၅၀ ရာခိုင်နှုန်း လျော့ကျမှုကို ကြုံတွေခဲ့ရသည်။ ထို့ကြောင့် ကုန်ကျစရိတ်ကို လျှော့ချရန်အတွက် ဘီယာချက်စက်ရုံကို လည်ပတ်နိုင်စွမ်း၏ အနည်းဆုံးအထိ လျှော့ချခဲ့သည်။ ဘီယာချက်စက်ရုံ၏ သဘောသဘာဝအရ စက်ရုံကို ပိတ်ထား၍ မရပေ။ ပိတ်ထားပါက ပြန်လည် လည်ပတ်သည့်အခါတွင် နှစ်လခန့်အထိ ကြာတတ်သည်။ ယခုအခါတွင်တော့ အစိုးရအနေဖြင့် ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးအစီအမံများကို ဖြေလျှော့မှုများ ပြုလုပ်ခဲ့သကဲ့သို့ စက်ရုံမှာလည်း ပုံမှန်အတိုင်း ပြန်လည် လည်ပတ်နေပြီဖြစ်သည်။
လက်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံတွင် အသေးစား ဘီယာချက်လုပ်ငန်းနှစ်ခုရှိပြီး ၎င်းတို့မှာ Burbrit Craft Beer နှင့် York street Brewing Co., တို့ဖြစ်သည်။ စီးပွားဖြစ် အကြီးစား ဘီယာချက်လုပ်ငန်းအနေဖြင့် ခြောက်ခုရှိပြီး ၎င်းတို့မှာ Alliance Brewery Co Myanmar (Asia Pacific Breweries-Heineken)၊ Dagon၊ Emerald Brewery Myanmar (ThaiBev)၊ Mandalay Brewery၊ Myanmar Brewery Limited၊ နှင့် Myanmar Carlsberg Co, Ltd တို့ဖြစ်သည်။
Myanmar Brewery Limited က ထုတ်လုပ်သည့် Myanmar Beer က ဘီယာဈေးကွက်တွင် လွှမ်းမိုးထားပြီး Myanmar Carlsberg တို့ကဲ့သို့သော အခြားဘီယာချက်လုပ်ငန်းများက ကျန်ရှိသည့်အပိုင်းကို ခွဲဝေပိုင်ဆိုင်ထားကြသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ယမကာသောက်သုံးမှုမှာ ၂၀၁၀ ခုနှစ်တွင် ပျမ်းမျှ ၂ဒသမ၉ လီတာရှိပြီး ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် ၄ဒသမ၈ အထိ နှစ်ဆနီးပါး တိုးလာသည်။ ယင်းအနက် ၈၆ ရာခိုင်နှုန်းက အရက်သောက်သုံးပြီး ၂၂ ရာခိုင်နှုန်းက ဘီယာသောက်သုံးကြသည်။
ဒိန်းမတ်အခြေစိုက် Carlsberg Group မှာ ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင် ဦးသိန်းထွန်းပိုင်ဆိုင်သော Myanmar Golden Start (MGS)နှင့် အကျိုးတူလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရန် လက်မှတ်ထိုးခဲ့ပြီး မြန်မာဈေးကွက်သို့ ဝင်ရောက်ခဲ့သည်။ ဦးသိန်းထွန်းမှာ မြန်မာတိုင်းမ်သတင်းစာတိုက်ကို ပိုင်ဆိုင်သော Myanmar Consolidated Media တွင် ရှယ်ယာအများစုကို ပိုင်ဆိုင်ထားသည်။
“လွန်ခဲ့တဲ့ လေးနှစ်ခွဲတုန်းက ကျွန်တော်တို့ သုညကနေ စခဲ့တယ်” ဟု Mr. Christoph က ဆိုသည်။ “အခုဆိုရင် ဆယ်ရာခိုင်နှုန်း နီးပါးလောက်ရှိပြီ။ ဒီရလဒ်က သိပ်အဆိုးကြီးတော့ မဟုတ်ဘူး”
Myanmar Carlsberg အနေဖြင့် ယင်း၏ ထုတ်ကုန်၊ ဝန်ဆောင်မှုများကြောင့် လာမည့်နှစ်အနည်းငယ်အတွင်း မြန်မာဈေးကွက်၏ လေးပုံ တစ်ပုံကို ပိုင်ဆိုင်ထားသည်။ မြန်မာဘီယာဈေးကွက်အနေဖြင့် တစ်နှစ်လျှင် ၈ ရာခိုင်နှုန်းဖြင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နေသည်။ သို့သော် ပြည်တွင်းရှိ ဘီယာချက်လုပ်ငန်းများမှာ စိန်ခေါ်မှုများနှင့် ကြုံတွေ့နေရသည်။ အဆိုပါ စိန်ခေါ်မှုမှာ တရားမဝင်ကုန်သွယ်မှုဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့် ပြည်တွင်းတွင် Chang ဘီယာကို ထုတ်လုပ်နေသော Emerald Brewery Myanmarဆိုလျှင် ထိုင်းနိုင်ငံမှ တစ်ဆင့် ပြည်တွင်းဈေးကွက်သို့ တရားမဝင် သွင်းလာသည့် Chang ဘီယာများနှင့် ဈေးကွက်လုနေရသည်။ Euromonitor International ၏ သုတေသနအရ ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံ၌ သောက်သုံးခဲ့သော ဘီယာစုစုပေါင်း၏ ၃၀ ရာခိုင်နှုန်းမှာ တရားမဝင် တင်သွင်းလာသော ဘီယာများဖြစ်ကာ နိုင်ငံတော်အနေဖြင့် အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း၅၀ အခွန်နစ်နာခဲ့ရသည်ဟုဆိုသည်။
တရားမဝင်ကုန်သွယ်မှုမှာ အခွန်ဆုံးရှုံးမှုအပြင် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ဘေးကင်းမှုပြဿနာမျာကို ဖန်တီးပေးရုံမက ပြည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို နစ်နာစေကာ တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုကိုလည်း စိန်ခေါ်နေသည်။
“တရားမဝင်ကုန်သွယ်မှုဟာ ရာဇဝတ်ဂိုင်းတွေကို ပျိုးထောင်ပေးသလို ဖြစ်နေတယ်။ ဘီယာကနေ စလာပြီး နောက် မူးယစ်ဆေး၊ အဲဒီနောက် လက်နက်အထိ ဖြစ်နိုင်တယ်။ ဒါကို မထိန်းချုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင် ရာဇဝတ်ဂိုဏ်းတွေပေါ်ပေါက်အောင် ဖန်တီးနေသလို ဖြစ်နေတယ်” ဟု Mr. Christophက ပြောသည်။
သူက အမေရိကန်တွင် ၁၉၂၀ က ၁၉၃၃ အထိ ကျင့်သုံးခဲ့သော Prohibition Era ကို ထောက်ပြသည်။ အဆိုပါ ကာလမှာ ယမကာ ထုတ်လုပ်၊ တင်သွင်း၊ သယ်ပို့၊ ရောင်းချမှုအားလုံးကို တစ်နိုင်ငံလုံးတွင် ပိတ်ပင်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုကဲ့သို့ ပိတ်ပင်ခြင်းက ရာဇဝတ်ဂိုက်များကို ပေါ်ပေါက်စေခဲ့သည်ဟုဆိုကြသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော အရက်ဘီယာ ပိတ်ပင်ခြင်းကြောင့် အရက်၊ဘီယာ ခိုးသွင်းမှုများ ပေါ်ပေါက်စေခဲ့ကာ မာဖီးယားဂိုဏ်းများအနေဖြင့် အဆိုပါ ကာလမတိုင်ခင်က ပြည့်တန်ဆာလုပ်ငန်း၊ လောင်းကစားလုပ်ငန်များသာ လုပ်ကိုင်ခဲ့ကြသည်။
မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့်လည်း ၁၉၆၂ ခုနှစ်ကတည်းက ကျင့်သုံးခဲ့သော ယမကာတင်သွင်းခွင့် ပိတ်ပင်မှုကို မကြာသေးခင်က ဖယ်ရှားခဲ့သည်။ သို့သော ကျွမ်းကျင်သူများအပြင် အစိုးရတာဝန်ရှိသူများကပါ ယင်းကဲ့သို့ တရားဝင်တင်သွင်းခွင့်ပြုခြင်းက တရားမဝင်တင်သွင်းခြင်းအပေါ် ချက်ခြင်း သက်ရောက်နိုင်ဖွယ်မရှိဟု ဆိုကြသည်။ တရားမဝင်တင်သွင်းမှုများမှာ နယ်စပ်ဒေသမှဖြတ်ကာ ရန်ကုန်၊ မန္တလေးကဲ့သို့သော မြို့ကြီးများအထိ ရောက်ရှိကာ ယခုအခါ ရန်ကုန်မြို့ရှိ လက်လီဆိုင်များ၊ စားသောက်ဆိုင်များ၊ ဘားများ၊ ဟိုတယ်များတွင်ပင် တွေ့ရှိနိုင်သည်။
ထိုကဲ့သို့ စိန်ခေါ်မှုများနှင့် စီးပွားရေးကျဆင်းမှုများရှိနေသော်လည်း Myanmar Carlsberg ကတော့ မြန်မာဈေးကွက်၏ အလားအလာများအပေါ် ယုံကြည်မှုရှိပုံရသည်။ ၎င်းအနေဖြင့် ဘီယာချက်စက်ရုံကို တိုးချဲ့ရန် စီစဥ်နေသကဲ့သို့ စက်ရုံခေါင်မိုးကိုလည်း ဆိုလာပြားများဖြင့် မိုးကာ ထိုမှရရှိသော လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကို သုံးစွဲလျက် စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုလျှော့ချရန် လုပ်ဆောင်နေသည်။ ထို့အပြင် ဘီယာချက်လုပ်ခြင်းမှ ထွက်ပေါ်လာသော အပူကို ပြန်လည်သုံးစွဲကာ စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်သည့် heat recovery system ကိုလည်း အကောင်အထည်ဖော်ရန် ဆောင်ရွက်နေသည်။ ဈေးကွက်အလားအလာများအပေါ် ကုမ္ပဏီ၏ အကောင်းမြင်မှုကို Mr. Christoph ၏ မှတ်ချက်တွင် ဤသို့ တွေ့နိုင်ပါသည်။
“ရေရှည်မှာတော့ ဒီနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီး ကျွန်တော် အကောင်းမြင်ပါတယ်။ လူမှုရေးကဏ္ဍဖြစ်ဖြစ်၊ နိုင်ငံရေးကဏ္ဍဖြစ်ဖြစ်၊ စီးပွားရေးကဏ္ဍဖြစ်ဖြစ် ဒီနိုင်ငံရဲ့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မျုတွေကို ကျွန်တော် အကောင်းမြင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့ အခုလို လာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံတာဖြစ်ပါတယ်။ ဈေးကွက်နဲ့ စီးပွားရေးအလားအလာတွေကို ကျွန်တော် အကောင်းမြင်ပါတယ်“
Previous articleLocal Gold Prices Likely to Rise Gradually
Next articlePoverty Drops by 50%; Vulnerability Remains an Issue